NPK Compound Fertilizer Extrusion Granulation Production Line - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Manana traikefa feno amin'ny tsipika famokarana granular extrusion tsy misy maina. Tsy ny rohy fizotry ny fizotran'ny famokarana ihany no ifantohantsika, fa koa ny mahatakatra ny antsipirian'ny fizotran'ny tsipika famokarana tsirairay avy ary hahatratra tsara ny fifandraisana. Ny fizotry ny famokarana feno dia iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny fiaraha-miasao amin'ny Yizheng Heavy Industries. Manome vahaolana namboarina namboarina mifanaraka amin'ny tena ilain'ny mpanjifa izahay.
Tsy misy tsipika famokarana granulation extrusion manamaina afaka mamokatra zezika fambolena avo lenta sy salantsalany ary ambany amin'ny voly isan-karazany. Ny tsipika famokarana dia tsy mila maina, miaraka amin'ny fampiasam-bola kely sy ny fanjifana angovo ambany.
Ny roller tsy misy fanamainana granular extruding dia azo foronina ho sombin-javatra samy hafa endrika sy habe ary azo esorina hamokatra habe samihafa.
Izahay dia manome andiam-pamokarana granular extrusion tsy misy maina izay tsy mila maina. Ny fitaovana famokarana dia misy indrindra ny mixer, disk feeder, roller extrusion granulate machine, roller sieve machine, belt conveyor, automatique fonosana automatique ary fitaovana fanampiny fanampiny.
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina amin'ny fitaovana famokarana zezika anay, dia manome fitaovana ho an'ny mpanjifa izahay ary ny vahaolana mety indrindra amin'ny filan'ny fahaiza-manao isan-karazany toy ny 10.000 taonina isan-taona ka hatramin'ny 200.000 taonina isan-taona.
1. Ny granulation pression mekanika dia ampiasaina raha tsy misy fitaovana hafanana na manasatra.
2. Mety amin'ny akora mora tohina, toy ny amonium bikarbonat
3. Tsy ilaina ny maina ny fizotrany, miaraka amin'ny fampiasam-bola kely sy ny fanjifana angovo ambany.
4. Tsy misy rano maloto, famoahana entona mandoto, tsy misy fandotoana ny tontolo iainana.
5. Ny fizarana haben'ny sombiny dia mitovy, ary tsy misy fanavahana sy fanangonana.
6. Fandrafetana matevina, haitao mandroso, fandidiana azo antoka ary fikojakojana mety.
7. Mora miasa, mora mahatsapa fanaraha-maso mandeha ho azy, ary manatsara ny fahombiazan'ny famokarana.
8. Misy karazana fampiharana ara-nofo tsy misy fepetra takian'ny fampisehoana manokana.
Tsy misy tsipika famokarana granular extrusion manamaina ahitana milina mandeha ho azy, conveyor fehikibo, blender axis roa, feeder disk, milina granulation extrusion, milina fitiliana vita amin'ny volo, trano fitehirizana entana, milina fonosana mandeha ho azy, sns.
1. Masinina mitambatra Dynamic
Ny masinin-tsakafo otrikaina dia mamelona ireo akora ilaina isaky ny refin'ny raikipohy, izay afaka mameno ho azy ny fizotran'ny fametahana azy amin'ny fahamendrehana sy fahombiazana avo lenta, mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny zezika. Aorian'ny fangaro dia alefa any amin'ny blender axis roa ny fitaovana.
2. Mixer zezika Double Shaft
Ny mpampifangaro kapila dia mampiasa reducer kodiarana cycloid handroahana ny spindle, ary avy eo handroaka ilay sandry mampihetsi-po mba hihodina sy hikorontana. Miaraka amin'ny flip mitohy sy ny fikolokoloana ny lelany amin'ny sandry mifangaro, mifangaro tanteraka ireo akora manta. Ny fitaovana mifangaro dia esorina amin'ny fivoahana any ambany. Ny kapila dia mandray takelaka polypropylene na firakotra vy tsy metaly, izay tsy mora raikitra ary tsotra sy azo ampiharina.
Ny akora mifangaro dia entina avy any amin'ny conveyor amin'ny fehikibo mankany amin'ny feeder disk, izay mandefa ny fitaovana amin'ny roatra efatra ao ambanin'ny feeder amin'ny alàlan'ny hopper. Ny milina dia manaparitaka ny fitaovana ho an'ny efitrano tapaka ao ambanin'ny roller amin'ny alàlan'ny roller mihodina mahery mifamadika, ary avy eo dia manasaraka ireo sombin-javatra ilaina rehefa mihodina ny tehina amboadia am-pito-borosy. Ny roller dia vita amin'ny fitaovana alikaola manohitra harafesina, tsy mahazaka ary tsy misy fiantraikany.
4. Screene Rotary Drum
Ny sombin-tsolika miharo volo dia entina mankany amin'ny sivana amin'ny alàlan'ny mpampita fehikibo, ary ny sombin-javatra tsy manara-penitra dia mivoaka avy ao amin'ny fantsom-bokotra lehibe amin'ny sisiny amin'ny alàlan'ny lavaka efijery, ary avy eo entina any amin'ny mpamatsy kapila ho an'ny granulation faharoa, ary ireo poti-kazo mahay dia omena avy amin'ny outlet farany ambany ary ampitaina amin'ny faritra vita.
5. Masinina fonosana elektronika
Amin'ny alàlan'ny hopper, ny sombin-kazo mahay dia milanja isa, ary avy eo fonosina amin'ny milina famonosana mandeha ho azy.